Myat Shu - 2012 March
You are here : Myat Shu » Archives for March 2012
Published By Myat Shu On Sunday, March 25th 2012. Under ၀တ္ထု, စကားပြေလက်ရာသန့်, မျက်ရှု
(၁) ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်ကို ကျွန်တော် လူမှန်းသိတတ်သည့်အရွယ်ကပင် ကြားဖူးသည်။ ကျွန်တော် ယခုလိုပြောလိုက်တော့ အပြောကြီးသည်ဟု ဆိုကြမည်လော မပြောတတ်။ လူမှန်းသိသည့်အရွယ် ဆိုသည်မှာ အလွန်ဆုံး လေး၊ ငါး၊ ခြောက်နှစ် ခုနစ်နှစ် အရွယ်လောက်တော့ ရှိတော့မပေါ့။ သည်လို ကလေးအရွယ်ကစပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ကြားဖူးသည်ဆိုတော့ ဧကန္တ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတကို ထိုအရွယ်ကပင် ရခဲ့မှာပဲဟု ဆိုရန် ရှိနေပါသည်။ စင်စစ် ကျွန်တော့်အား ဤမျှလောက် အထင် မကြီးသင့်။ ကျွန်တော်ကလည်း မ၀င့်ဝါတတ်။ ရိုးရိုးပင် အစီရင်ခံလိုပါသည်။ အမှန်ပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုသည့်စကားကို ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးပါသည်။ မမလှရင်ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီး မှတ်မိသည်။ မမလှရင်သည် စာတတ်ပေတတ်ကြီး မဟုတ်ပါ။ ရှေးခေတ်က မြန်မာမိန်းကလေးများနည်းတူ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, March 24th 2012. Under ၀တ္ထု, စကားပြေလက်ရာသန့်, မျက်ရှု
ဤ ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲတွေကား များလှပေတော့သည်။ မင်းတိုင်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ၊ မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဒိစတြိတ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲ၊ သူကြီးရွေးကောက်ပွဲ၊ ကျေးရွာကော်မတီရွေးကောက်ပွဲ။ များလိုက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲတွေ ရေတွက်၍ပင် မကုန်နိုင်ပြီ။ ယခုရေးသားမည့် ရွေးကောက်ပွဲကား သူကြီးရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လေသည်။ မည်သည့်ရွာက သူကြီးရွေးကောက်ပွဲ ပေနည်း။ လင်းလွန်းပင်ရွာက သူကြီးရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လေသည်။ လင်းလွန်းပင်သူကြီး ဦးဖိုးဆောင်ကား လူဆိုးဒမြတို့ကို ကြောက်သောကြောင့် သူကြီးအလုပ်က နုတ်ထွက်သည်မှာ ၂ လခန့် ကြာလေပြီ။ သူ၏သား မောင်သာပန်းက ရွာကို ခေတ္တခဏ အုပ်ချုပ်လျက် နေ၏။ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ထွန်းကားနေသော ခေတ်ကြီးထဲတွင် သူကြီးရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ရပေမည်။ ရှေးခေတ်ကမူကား သူကြီးသားမှာ မပင်ပန်းဘဲ သူကြီးဖြစ်သွားမည်မှာ မုချပင်။ လင်းလွန်းပင်ရွာတွင် ကျွက်စီကျွက်စီ ဖြစ်လျက်နေလေပြီ။ မောင်ရွှေကျေးကလည်း အရွေးခံမည်ဟု ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, March 22nd 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
(၁) ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာတွင် လှေပြိုင်ပွဲ၊ ပန်းပြေးပွဲ အစရှိသည့် တောဓလေ့ရိုးရာ ကစားခုန်စားပြိုင်ပွဲများ မကျင်းပဖြစ်တော့သည်မှာ နှစ်ကာလ အတန်ငယ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တိတိပပ ဆိုရလျှင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့လေပြီ။ လှေပြိုင်ပွဲ၊ ပန်းပြေးပွဲများ ကျင်းပကြမည် ဟူသောအသံများကို ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးတေဇ၀န္တ ပျံလွန်တော်မူသောအခါတွင်မှ တဖန်ပြန်လည်ကြားရခြင်း ဖြစ်၏။ ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကျေးရွာဖြစ်သည်အလျောက် မြေဆီသြဇာကြွယ်ဝသည်။ စပါးအထွက်ကောင်းသည်။ စပါးအထွက်ကောင်း၊ စပါးဈေးကောင်းသော်လည်း ရွာသူရွာသားတို့ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ရှာကြပေ။ လူမွေးလူရောင် မပြောင်ရှာ။ တစ်မိုးတွင်းလုံး ရွှံ့ထဲရေထဲတွင် ကျွဲ၊နွားတို့နှင့် နင်လားငါလား ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြရသော်လည်း ယင်းတို့၏ ဘ၀များမှာ ထူးခြား ပြောင်လက်လာခြင်း အလျဉ်းမရှိပေ။ တစ်နှစ်ကြာသော်လည်း ဒုံရင်း၊ နှစ်နှစ်ကြာသော်လည်း ဒုံရင်း၊ သုံးနှစ်ကြာသော်လည်း ဒုံရင်း၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, March 17th 2012. Under မျက်ရှု, သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
httpv://youtu.be/7nJ748NCFTQ (ထွဋ်မြတ်တဲ့ စံဌာနီ လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာပြည် မချွတ်အစဉ် လွှတ်သဘင် ဆင်နွှဲခဲ့ပြီ သဘင်ပွဲ သည်းညံစီ။ ဗမာ့ဟန်ရေး ရှေးထုံးမပျက်ပေါင် မရိုးစည်မောင်း ငြိမ့်ငြောင်း ဝေေ၀စည်) ၂ ။ မင်းပေါင်း စုံစုံညီညီ ဗိုလ်ရှုခံလမ်း ခန်းမဆီ လျှမ်းပ ကြိုင်လျှံ့ကာအတည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြွချီ အောင်လံတော်ကို အလေးပြုရပြီ။ ဗိုလ်ရှုသဘင် ဆင်ယင်တဲ့အခါမီ ကြည်း ရေ လေ စစ်သမီးမကျန်ရ ဗမာ့တပ်မတော် စုံစုံညီ ချီတက်ကာမနှေး အလေးပြုကြပြီ။ လာ လာချေပြီ။ ပျို့ချစ်ဦးလည်း ထူးကဲဟန်ချီ တပ်မတော် ရှေ့တန်းဆီ မှန်းဆစရာ မြူမစဲ လူလည်း မသည်းကွဲသည်။ မို့မို့မည်းမည်း သည်းသည်းညံစီ ကြွေးကြော်နေကြသည်။ တိုးတိုးကာ လူတွေထဲ မေလည်းပါနေသည်။ ပုဝါဖြူကလေး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, March 17th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
သူ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်ကလူတွေနဲ့ ခပ်ခွာခွာ နေတယ်။ အထူးသဖြင့် အမနဲ့။ အသက် ၆ နှစ်ကြီးလို့ ကစားဖော် မဖြစ်တဲ့အပြင် အမက တော်တော် လှတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ မအေတူ သမီးချောလေးလို့ အမကို လူတကာက ချီးမွမ်းကြတယ်။ ဆံပင်၊ အသားအရေက အစ မျက်လုံးမျက်ခုံး မျက်တောင်ကော့များ အလယ်၊ သွယ်ပျောင်းကိုယ်ဟန် အဆုံး တနေရာမှ အမေနဲ့ ဆင်ဆင်မရှိတဲ့ သူ့ရုပ်ကို မမြင်ချင်တာနဲ့ဘဲ မှန် လုံးလုံး မကြိုက်တဲ့သူ ဖြစ်လာတယ်။ အမေနဲ့အမကို ရှောင်နေတတ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူကလဲ သူ့ထက် တနှစ်သာငယ်တဲ့ မောင်ကလေးကို သားဆိုပြီး မက်မက်စက်စက် အလေးဂရု ရှိတာကိုလည်း မခံချိလှဘူး။ သူတို့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, March 14th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး
ကျွန်တော်သည် အခြားစာရေးဆရာ အတော်များများလိုပင် တက္ကသိုလ် နောက်ခံဝတ္ထုများ၊ ကဗျာများ ရေးခဲ့ပါသည်။ စာရေးဆရာ ဖြစ်ခါစမှာ ရေးခဲ့သော လုံးချင်းဝတ္ထုများမှာ တက္ကသိုလ်အကြောင်းအရာတွေ များပါသည်။ လူငယ်စာရေးဆရာအတော် များများသည် စာရေးခါစတွင် တက္ကသိုလ်အကြောင်း ရေးကြတာများကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဟု ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ဆန်းစစ်ကြည့်မိ၏။ အချက်နှစ်ချက်ကို တွေ့သည်။ ပထမအချက်က ဘွဲ့ရလို့ တက္ကသိုလ်နယ်မြေကို စွန့်ခွာခဲ့ရသော်လည်း တသသ စွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်၍ အလွမ်းပြေ ရေးမိခြင်း။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော နေရာဒေသဖြစ်၍ သရုပ်ပေါ်အောင် ရေးသားနိုင်ခြင်း။ အထက်ပါ အချက်နှစ်ချက်စလုံးသည် တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ၀တ္ထုများ ရေးသာရာမှာ ကျွန်တော့်အတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ လေးနှစ်ခွဲလောက် ကျောင်းတက်ခဲ့သည်။ ထိုကာလမှာ ကျွန်တော့်ဘ၀ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ... Continue Reading
ပညာတတ်ဆိုတာ (သားသို့ပေးစာ – ၄)
Published By Myat Shu On Tuesday, March 13th 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ...ရဲဝဏ္ဏ သားလေး...အခုအတန်းတင်စာမေးပွဲ ဖြေပြီးသွားပြီနော်။ သားလေး ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်ဖို့ ဖေဖေတို့၊ မေမေတို့ သားနဲ့အတူ စာကျက်၊ ကျောင်း၊ ကျူရှင်၊ ဂိုက် ဘာမှ လိုလေသေး မရှိအောင်ကို လုပ်ပေးပြီး ဖေဖေတို့ပါ သားနဲ့အတူ ''မော'' ခဲ့ရတာ သားလေး သိပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ သား... တကယ်တော့ ဖေဖေတို့တစ်တွေ သားလေးကို ပညာတတ်တစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေပေါ့ကွယ်။ သားလေးရေ ပညာတတ်ဆိုတာကို သားလေးသိအောင် ဖေဖေရှင်းပြရတော့မှာပေါ့။ သားရေ.. ပညာတတ်ကို အင်္ဂလိပ်လို Educated လို့ ယေဘူယျခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ ခေတ်ကာလနဲ့ နည်းပညာတွေ အမြဲပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့ ပညာတတ်ဆိုတဲ့ စံနှုန်းတွေလည်း ပြောင်းလဲကုန်တာပေါ့။ Life Style မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖေဖေဖတ်ခဲ့တဲ့ ... Continue Reading
ဦးချစ် (လက်ဖက်ရည်ဆိုင်)နှင့် ဗျူးခဲ့စဉ်က
Published By Myat Shu On Sunday, March 11th 2012. Under မျက်ရှု, အင်တာဗျူး, အမှတ်တရ
တစ်ခါက ကံ့ကော်တောမျာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထဲတုန်းက စာကြည့်တိုက်ပညာ ဒီပလိုမာကိစ္စကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ အမိတက္ကသိုလ်ကြီးထဲကို ရောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဓိပတိလမ်းမဂိတ်ဆီကနေ ၀င်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ဘူမိဗေဒ အဓိက ကျောင်းသားအဖြစ် ၁၉၈၀ လွန်ကာလဆီမှာတုန်းက တက်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးဆောင်ကြီးက ခပ်တည်တည်ကြီး ဖြစ်နေတယ် ထင်ရတယ်။ တောင်ငူဆောင်ဘက်ဆီ ဆက်လျှောက်တော့ ကင်တင်းစားသောက်ဆိုင်တန်းရှည်နဲ့ တိုးတယ်။ (ကျွန်တော်တို့တုန်းက ဒီဆိုင်တန်းရှည်တွေ မရှိသေးဘူး။ ဒီနေရာက စိန်ပန်းပင်တွေရှိတဲ့ မြက်တောကြီးပါ) အတူပါလာတဲ့ တပည့်ဖြစ်သူ စာနယ်ဇင်းသတင်းထောက်မလေးက သူ ဒီပလိုမာ သင်တန်းတွေ တက်ခဲ့စဉ် ဖောက်သည်ဖြစ်နေတဲ့ အခုနေရာသစ် ဦးချစ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ၀င်နားကြတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ ဟိုစဉ်က ဦးချစ်ဆိုင်ကို ပြန်သတိရဖြစ်ရင်း မရောက်တာ နှစ်များစွာရှိတဲ့ ကံ့ကော်တောရှုခင်း ... Continue Reading
ဘယ်တုန်းကမှ၊ ဘယ်သောခါမှ၊ ယခုလည်း
Published By Myat Shu On Thursday, March 1st 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ချီးမွမ်းကြတယ်။ အရေးအသား ကောင်းတယ်တဲ့။ အက်ဆေး၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတွေ ခဏခဏ ရတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ရေးဖူးတဲ့ အဖေ့အကြောင်း ညွှန်းဆိုတဲ့ အက်ဆေး (သို့) စာစီစာကုံး ဆိုတာ ရောင်းတမ်းဝင် စာအုပ်တွေထဲက ကူးချထားတဲ့ အပေါစားအက်ဆေး (သို့) စာစီစာကုံး တစ်ပုဒ်ထက်ဘယ်တုန်းကမှ မပိုခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့မှာ အဖေမှ မရှိခဲ့တာကိုး။ မေမေနဲ့ မာမီကတော့ ပြောပါတယ်။ မေမေ့အကြောင်း she နေရာမှာ he လို့ ပြောင်းရေးလိုက်ပေါ့တဲ့။ ဒါပေမဲ့ မေမေနဲ့ မာမီ မသိတာက she နေရာမှ he လို့ ပြောင်းလိုက်ပေမယ့် အဖေဆိုတဲ့ ... Continue Reading